दलितमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन के गर्दैछन् प्रदेश सभाका दलित सांसद? — JagaranMedia.Com
प्रकाशित : २०७७/२/८ गते
आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको तथा राष्ट्रिय बैठकमा सत्तारुढ दलको समर्थनमा नीति कार्यक्रम पारित भएको हो । यसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको छ । यद्यपि, दलित, विपन्न र सिमान्तकृत वर्गको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मी, नेता तथा सभासद्ले पनि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दलितमैत्री नभएको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
कोरोना महामारी राकथामका लागि गरिएको लकडाउनले विपन्न, दलित र सिमान्तकृतहरु अझै बढी समस्यामा रहेकाले उनीहरुको समस्या सम्बोधन हुने हिसाबले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नआएको कतिपयको ठहर छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित हुँदै गर्दा प्रदेश सरकारमा पनि यही चटारोमा जुटेको छ ।
कोरोना भाइरसबाट सर्तकता अपनाउँदै बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने तयारीमा अधिकाँस प्रदेशहरु जुटिरहेका छन् । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमलाई दलित एवं सिमान्तकृत समुदायमैत्री बनाउन दलित सांसद्हरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । बजेट आउनु अगाडि पर्याप्त पहल र पैरवी भएको खण्डमा समाजको पिँधमा रहेको वर्गको जीवनमा परिर्वतन ल्याउने खालको नीति तथा कार्यक्रम आउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यसै विषयमा चासो राख्दै जागरण मिडिया सेन्टरले सातै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग नीति तथा कार्यक्रमको तयारी कस्तो र कसरी हुँदैछ ? भन्ने विषयमा कुराकानी गरेको छ ।
जसमाया गजमेर, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री, प्रदेश १
कोरोनाको प्रभाव र असर विश्वभर फैलिएको छ । सबै भय र त्रासमा छन् । नेपालमा पनि कोराना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । प्रदेश नम्बर १ पनि उच्च जोखिममा छ । यसबाट जुध्नको लागि कोशी कोभिड अस्पातल एकान्त ठाउँमा निर्माण गरेका छौं । संक्रमीतहरुको यही अस्पतालबाट उपचार भइरहेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अस्पताल विस्तार र ल्याबहरु स्थापना गर्ने कार्य गरेका छांै । खुल्ला सिमाना भएका कारण पनि लुकीछिपी आउनेहरुको संख्या धेरै छ । व्यवस्थीत तरिकाले ल्याउन पनि संघिय सरकारको अनुमति चाहिन्छ । जसले गर्दा हामी उच्च जोखिममै छौँ । त्यही अनूरुप उच्च सर्तकताका साथ काम गरिरहेका छौं ।सडक मानव मुक्त बनाउने काम पनि भइरहेको छ । उनीहरुको संरक्षण र उत्थानका काम पनि अघि बढेका छन् । दलित समुदायबाट सातवटै प्रदेशमा म मात्र हो, एक राज्य मन्त्री । त्यसैले पनि दलित समुदायको तर्फवाट मन्त्री हँुदा र नहँुदा धेरै फरक पर्छ । सबैले आशा गर्नुभएको छ । त्यसैले निराश नपार्ने हिसाबले उदाहरणीय काम गर्न क्रियाशील छु ।आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो आउँछ भनेर निकै चासोका साथ हेरिएको छ । केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम पनि हेरेको छु । यसको बारेमा विभिन्न तहबाट र दलित समुदायको तर्फबाट पनि असन्तोष व्यक्त भएका छन । त्यसलाई पनि मध्य नजर गर्दै प्रदेश एकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरीने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । दलित तथा उत्पीडित समुदायको आन्दोलन, माग र आवश्यकता अुनसार दलितको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने छु । सातैवटै प्रदेशमा एक नम्बर प्रदेश उदाहरण नै बन्ने कोशिसमा छौं । यसका लागि दलित समुदायका सभासद र अभियान्ताहरु पनि लागि पर्नु भएको छ । दलित समुदायका माग र सवालबारे ध्यानकर्षण पत्र पनि हामीलाई दिनु भएको छ । सबै नै अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा आउनेछ ।
प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश १
म धरानमा छु । लकडाउन त छ तर पनि आफ्नो जिम्मवारी त पुरा गर्नु पर्याे । जनताको अप्ठ्यारोमा उहाँहरुको समस्या बुझ्ने र समाधानको पहल गर्ने काम गरिरहेको छु । जनप्रतिनिधी भएकाले म जनताकैबीचमा छु । व्यक्तिगत रुपमा र अरुसंग संयोजना गरेर पनि राहत वितरण गर्ने काम गरिरहेको छु । गरिब र विपन्न वर्गको सहयोगको लागि विभिन्न तरिकाले सहयोग र संयोजन सक्दो गरिरहेको छु । स्वास्थ्य समस्याहरु देखिएका ठाउँहरुमा अस्पतालसँग संयोजन गरेर सेवा प्रदान गर्ने काममा पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । खास गरी मेरो पहलमा र दलित अभियान्ता साथीहरुको संयोजनमा आगामी नीति तथा कार्यक्रममा दलितका सवालबारे प्रदेश एकका मुख्यमन्त्रीसँगै अन्य सबै मन्त्रीलाई ध्यानआकर्षण पत्र दिने काम भएको छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउने विषयमा निर्वतमान र वर्तमान सभासदहरु संग छलफल गरिएको छ । एजेण्डाहरु पनि तय गरीएको छ । मन्त्री, सासद र दलित नागरीक समाजबीच छलफल चलि नै रहेको छ । दलित समुदायलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषि मन्त्रीसंग पनि कुरा भएको छ । त्यस्तै उद्योग मन्त्रीसंग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेको छु । दलित समुदायलाई रोजगारी र व्यवसायमा विशेष प्राथमिकता दिन माग गरेका छौं भने दलित समुदायका परम्परागत सिप र पेशाको संरक्षण र प्रर्वधनका लागि माग गरेको छौं । एक न प्रदेशमा दलित समुदायका लागि छुटटै शसक्तिकरण ऐन ल्याउनको लाागि पहल पनि गरेका छौ । त्यो छिटै आउँदै छ ।
कल्पना कुमारी सरदार, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश १
म विराटनगरमा छु । राहत र समस्यामा परेका जनताको लागि सक्दो सहयोग र सहकार्य गरेको छु । त्यसका लागि विभिन्न निकायसंग संयोजनको काम पनि भइरहेको छ ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे पनि छलफल भइरहेको छ । प्रदेश सभामा दलितमैत्री बजेट निर्माणका लागि आवाज उठाउनेबारेमा सोचिरहेको छु । दलित,महिला, मधेश र अन्य सिमान्तकृत समुदायको अधिकारको लागि फाइदा हुने किसीमको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सक्दो पहल गर्दैछु ।
चमेली देवी दास,
प्रदेश सभा सदस्य,
म जनकपुरमा छु । कोरोनाको प्रभावले मधेश अझै बढी जोखिम र समस्यामा छ । सिमानामा थुप्रै जनता उद्धारको पर्खाइमा छन् । त्यसको लागि सक्दो पहल गरिरहेका छौं । तर, संक्रमणको डर पनि उत्तिकै भएकाले सचेतना अपनाउन पनि जरुरी भएकाले समस्या भइरहेको छ । समस्यामा परेकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । यसका लागि फोनबाट पनि सक्दो संयोजनकारी भूमिका खेलिरहेको छु । कोरोनाको डर र त्रास व्यापक छ । नीति तथा कार्यक्रमबारे केही सोचेको छैन । यो बारेमा छलफल हुने भनेर तपाईहरुसँग कुरा गर्दासम्म कुनै आधिकारिक जानकारी मैले पाएको छैन ।
प्रमिला देवी दास,
घरमै समय बिताएको छु । राहात वितरणको लागि सहयोग र संयोजनकारी भूमिका खेलिरहेको छु । हाम्रो प्रदेश कोरोनाको अत्यधिक जोखिममा छ । त्यसको रोकथाम र समस्यामा परेकाहरुको बारेमा नै बढी केन्द्रित भइरहेका छौं । पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोना रोकथाम नै हो । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमबारे धेरै सोच्न पाएका छैनौं । छलफल पनि हुन पाइरहेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममाथी संसदमा छलफल हुँदा विपन्न वर्गमैत्री बजेट ल्याउन आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउने नै छौं ।
म बारा जिल्लामा छु । कोरानाको कारण आएका समस्या समाधानका लागि क्रियाशील छु । राहातको संयोजन गर्नुका साथै अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेकाले सरकारका सबै तह संग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन पनि सक्दो पहल गरिरहेको छु । खुला सिमाना भएका कारण कोरोना रोकथाम गर्न निकै गाह्रो परिरहेको छ ।
आम नागरिकको अप्ठ्यारोका बारेमा स्थानिय तहमा हुने सर्वदलिय बैठकमा भाग लिने, छलफल गर्ने र कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुका साथै सल्लाह सुझाव आदानप्रदानको काम पनि सहभागि भइरहेको छु । यस्तै, सरकारलाई खबरदारीका साथै सल्लाह र सुझाव दिने काम गरेको छु । गरिब, विपन्न र बिरामीहरुको समस्या समाधानका लागि संयोजन गरेका छांै । प्रशासन र सांसदहरु संग छलफल गरेको छु । हामीले नीति तथा कार्यक्रमबारे केही सोचेका छैनौं । पहिलो प्राथमिकता कोरोना रोकथाम र जनतालाई बचाउने हो । अहिले प्रदे्श २ को नीति तथा कार्यक्रम अनिश्चीत नै छ । समय आएपछि नीति तथा कार्यक्रममा हामी लाग्छौ र काम गछांै । त्यसका लागि दलित अभियान्ता, सांसदहरु र दलित नेताहरुसंग संयोजन र छलफल गरेर .दलितमैत्री बजेटको माग गर्ने सोच राखेका छौं ।
मैना अछामी, प्रदेश सभा सदस्य, वाग्मति प्रदेश
म काठमाडौंमा छु । यो अवस्थामा पहिला जस्तो काम गर्न त सकिएको छैन । राहत वितरण कार्यक्रममा सहभागी भएको छु । भोकाएका र समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गरिरहेको छु । खाना खुवाउने ठाउँहरुमा अनुगमन गर्ने गरेको छु । फोनबाट अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहयोगको लागि संयोजन र सहजिकरण गरिरहेको छु ।
बागमति प्रदेशमा १२ गते बाट प्रदेश सभा सुरु हँुदै छ । नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हँुदै छ । दलितमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि दलित नेता र नागरीक समाजहरुसंग सल्लाह र सुझाव लिइरहेको छु । समाजको पिँधमा रहेको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सभामा पुगेकाले आफ्नो समुदायको समस्याबारे मलाई राम्रो जानकारी छ । त्यस्ता समस्या सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन संदनमा आवाज उठाउनेछु ।
कल्पना नेपाली, प्रदेश सभा सदस्य, वाग्मति प्रदेश
म काठमाडौंमा छु । लकडाउनका कारण घरमै बसेको छु । गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुसंग पनि संयोजन गरिरहेको छु । राहत वितरण लगायतको काममा पनि संयोजन गरिरहेको छु । गरिब, विपन्न र एकल महिलाहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि सहयोग गरेको छु ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रको लागि पनि तयारी गर्दैछु । विभिन्न तहका व्यक्तिहरुसंग सुझाव र सल्लाह मागेको छु । विशेष गरेर दलित, दलित महिला, एकल महिला, बालवालिका र वृद्धवृद्धाको पक्षमा नीति तथा कार्यकम र बजेट आउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको छु । यसैबारेमा संसदमा पनि आवाज उठाउनेछु । कोरोनाको प्रभावले धेरै मान्छेको जीवनमा असर गरेकाले उनीहरुको सुरक्षा र सहयोगको लागि नीति तथा कार्यक्रममा बोल्ने तयारी गरेको छु । साथै चेलिबेटी बेचबिखनबारे पनि योजना आवश्यक छ । त्यसैले यो बारेमा पनि बोल्ने छु ।
जुना नेपाली, प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेश
कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्दै समस्यामा परेका आम नागरिकलाई सक्दो सहयोग गरिरहेको छु । बन्दाबन्दीले गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायमा व्यापक असर परिरहेकाले यो अब आउने बजेटले यी कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गको पक्षमा बजेट आउने अपेक्षासहित त्यसका लागि व्यक्तिगत तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने छु । जातिय विभेद तथा छुवाछूत ऐन कानुन बनेको भएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसको लागि पनि हामीले सोच्नु पर्ने देखिरहेको छु । यसको विरुद्धमा दलित अधिकारकर्मी, बौद्धिक र सचेत वर्ग कृयाशिल भइरहेका छन् । हामीले संससदमा पनि यो विषयलाई विशेष महत्व दिएर वकालत गरिरहेका छौं ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ । नीति र कार्यक्रमले दलित र सिमान्तकृत वर्गलाई छुन सक्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको छु । यस विषयमा छलफल हुँदा आवश्यक सल्लाह, सुझावसँगै समन्वयकारी भूमिका पनि खेल्नेछु । यो समुदायलाई उद्यमशील बनाउने खालका योजनाहरु आवश्यक छन् । यसको लागि पनि पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्नेछु ।
दिल माया रोक्का मगर (गौतम), प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेश
विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को माहामारीले सन्त्रास फैलिएको छ । त्यसैले हरेक कामहरु सोचे अनुरुप गर्न त सकिएको छैन । यहि शिलशिलामा म पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र बागलुङ्ग क्षेत्र नं.२ (क) ताराखोला गाउँपालिका तिरै छु । मेरो घर पनि यतै हो । जनताहरुसंग सहकार्य गर्ने, हातेमालो गर्ने, जनप्रतिनिधिहरुसंग दुरी कायम गरेर भेटघाट गर्ने यस्तै काम भइरहेको छ । अब ११ गते देखि सदन चल्दै छ भोली पोखरा जान्छु ।
पहिलो कुरा त सिङगो राष्ट्र कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानुपर्छ । समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली भन्ने संकल्प थियो त्यो कसरी पुरा गर्ने तर्फ नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । त्यसमा पनि विभिन्न तह, जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग र वर्गहरु छन । उनीहरुलाई नसमेटि समृद्ध नेपालको परिकल्पना पुरा हँुदैन । त्यसैले गरिब र बेरोजगारी घटाउन उत्पादन जोड दिदै त्यो समुदायमा चेतना अभिबृद्धि गर्दै निर्णायक तहमा पु¥याउन जरुरी छ । संबिधान त दक्षिण एसियाकै राम्रो छ भनिएको छ तर पालन नहँुदा समस्या उस्तै छन । नीति र विधि जति राम्रो भए पनि चेतना संस्कार, संस्कृति र व्यवहार परिवर्तन नभए सम्म विकास हुन सक्दैन त्यसका लागि म आफु पनि लागेकी छु, संगठित भएर यो समुदाय पनि उठनुपर्छ जुटनुपर्छ ।
दोबाटे विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेश
अहिले म जिल्ला तिर छु । मेरो घर दमौली तनहँु हो यतै छु । अब बजेट बनाउने तयारी हँुदैछ म अर्थविकास समितीमा पनि भएकाले बैठकहरु भइरहेका छन । दुरी कायम गर्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभागका सरोकारवाला निकायसंग यो असहज परिस्थितीमा कसरी बजेट बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । अहिलेको बजेट कोभिड १९ लाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र गरिबी निवारणमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । धेरै युवा वैदेशिक रोजगार गुमाएर फर्किदै हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रदेश पर्यटन व्यवसायमा बढि निर्भर हुने भएकाले त्यो क्षेत्र पनि प्रभावित छ । त्यस्तै मजदुर, गरिब, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका सवाल पनि समेटीनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौं । सदनमा, समितीहरुमा आवाज उठाउने, दबाव दिने त गरेका छौं तर हाम्रा आवाजको सम्बोधन हुन सकेको छैन । कोरोनाबाट सबै भन्दा प्रभावित श्रमिक, दलित तथा सिमान्तकृृृत समुदाय नै हो । त्यसैले उनीहरुलाई राहतका प्याकेज ल्याउने,कसरी गरिखाने वातावरण बनाउने भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ । सदियौ देखि पछाडि पारीएको समुदाय दलित तथा सिमान्कृतलाई राहत हुने, उत्थान गर्ने कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छौं तर कसरी सम्बोधन हुन्छ थाहा छैन । यद्यपि, दवाव दिन, झकझकाउन छोडिदैन यसमा निरन्तर लाग्ने नै हो ।
कोपिला बोहोरा प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेश
म अहिले पोखरामा छु । पार्टी, समितीका बैठकहरुमा भइरहेका छन त्यसमा भाग लिने आवाज उठाउने काम गरिरहेको छु । कोभिड १९ भाईरसले सबैलाई तर्साएको छ । सबै भन्दा बढि गरिब,बिपन्न,दलित तथा सीमान्कृतलाई बढि असर गरेको छ । त्यस्तै कतिपय बिदेशमा अल्पत्र परेका छन । सबै तिर अप्ठ्यारो छ । त्यसैले अबको बजेटमा यस्ता सवाल आउनै पर्छ । खान नपाएर मर्ने दिनुहुन्न राहत र गरि खाने कुरामा जोड दिनुपर्छ । बिकास निर्माण काम त आउदा वर्षहरुमा गरौला अहिले मान्छे बचाउनु ठुलो काम हो । यसैमा प्रदेश सरकारसंग आवज उठाउदै आएका छौ । त्यस्तै महिला,दलित तथा सिमान्तकृतका सवालहरुमा आवाज उठाउने काम त गरेकै छौ । तर हाम्रो भुमिका, काम खासै देखिदैन किनकी सुन्ने काम भएको छैन । यद्यपि, हामी संगठित भएर पहल र दबाव दिने काम जारी नै हुन्छ ।
कमलादेवी विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश ५
कोरोना महामारीका कारण धेरैजसो समय घरमै बिताएको छु । जनप्रतिनिधि भएकाले फोन मार्फत जानकारी लिने काम गरेको छु । म रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गर्ने र जनताको समस्यालाई समाधानका लागि पहल पनि गर्ने काम गरेको छु ।
कोरोना संकटका विचमा अब प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी पनि भइरहेको छ । यो सन्दर्भमा राजनीतिक र सामाजिक रुपमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले स्वभाविक रुपमा दलित र सिमान्तकृत समुदायका लागि लाभ हुने कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्ने काम भइरहेको छ ।
अहिले पनि मन्त्रीहरुले बिषयगत मन्त्रालयबाट टेलिफोनमा सोधपुछ गर्नेक्रम भइरहेको छ । मन्त्रालयगत हिसाबले छलफल गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको देखिन्छ । विगतमा सञ्चालनमा भएकाहरु निरन्रता दिने, सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गहरुका बिषयमा छलफल भइरहेको छ । विगतमा जस्तो व्यापक छलफल भने भएको छैन । महिलामैत्री, दलित र सिमान्तकृत मैत्री बनाउन भनेका छौं । हाम्रो तर्फबाट राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रबाट भनेका छौं । सुझाव दिएका छौं । विगतमा भगत सर्वजित शिल्पकलामा बजेट छुटएका थियौं । घरेलु मार्फत कार्यक्रम भयो । तर प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो पनि छ । यसलाई पालिका स्तरमा लैजाने गरि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छु । मुख्यमन्त्रीलाई समेत दलित समुदायले सामाजिक र आर्थिक रुपमा भोगेका उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने गरि कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
नीति कार्यक्रम ल्याउदा पछाडि पारिएका वर्गलाई समेट्नपर्छ । कार्यान्वयन तहमा फितलो हुने र मर्म अनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ । पहुँच विहिनलाई राज्यले दिएको सुविधाका बारेमा पनि जानकारी नभएकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले अब त्यसो हुन नदिन सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छु मैलै । पालिकामै दलित समुदायका लागि छुट्टाइएको बजेट पुर्याउने गरि बजेट ल्याउनुपर्छ । यो वर्ष दलित वा सिमान्तकृतको लागि भने बजेट कम हुने संकेत देखिएको छ
आशा स्वर्णकार, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश ५
अहिले त कोरोना महामारीले गर्दा प्राय वाहिर हिड्न सक्ने स्थिती छैन । तथापि एउटा दुर्गम क्षेत्र र त्यसमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि भएकाले कोरोना महामारीले निम्त्याएका विभिन्न असरहरुका बारेमा सहजीकरण गर्ने काममा नै वित्यो । बुटवल र रुकुम पूर्व गरेर वितेको छ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स हस्तान्तरणका लागि रुकुम पुगे । अहिले अब आउने ९ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकका लागि बुटवलमै छु । अब शुरु हुने सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने छ । अहिले नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा पोहोर परार जस्तो गहिरो गरि छलफल गर्न पाइएको छैन । दलित र पछाडि पारिएका समुदायलाई कोरोना भाइरसले ठूलो असर पारेको छ । विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविको पार्जन गर्ने अधिकांश दलित समुदाय नै छन् । भूमिहिन पनि दलितहरु नै भएकाले दलितहरुलाई ठूलो मर्का पर्नेवाला छ । तसर्थ सरकारले तिनै वर्गलाई सम्बोधन गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि सरकारले ल्याउने कार्यक्रमहरु पर्याप्त छैनन । छलफल शुरु भएपछि त्यसमा हामीले दलित मैत्री ल्याउने पक्षमा सांसदको हिसाबले पहल अवश्य हुन्छ । तर यो वर्ष भने कोरोनाले गर्दा दलित वा सिमान्तकृतका पक्षमा बजेट आउन गाह«ो देख्छु म त । तर पनि फेरी मलाई लागेको के छ भने यो बेलामा कम्तीमा श्रमजिविहरुलाई राहात दिने गरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सुकिला मुकिलाले राहात पाएका छन् , तर दलित र सिमान्तकृले त्यति थाहा पाएका पनि छैनन । यसतर्फ ध्यान दिन मेरो तर्फबाट पहल हुन्छ । विगतमा पनि सरकारले छुटाइएको बजेट अर्थपूर्ण देखिएको छैन । तल्लो तहका वर्गले अनुभूती गर्ने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि पाटी र सरकारलाई मैलै ध्यानआकर्षण गराउने छु ।
दीपा विक, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश ५
कोरोना महामारीका कारण मूलूक लकडाउनमा छ । यसको मारमा अन्य नागरिक जस्तै म पनि परेको छु । नियमित कार्यक्रम छैन । कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडानको पालना गर्ने र स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेका अभियानमा भाग लिने काममा ब्यस्त छु । राहात वितरण, तथा सरकारले काममका बारेमा अनुगमन गर्ने काममा समेत हिडेको छु ।
जहाँसम्म प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा हो । अब आउदो आर्थिक वर्ष ७७÷७८ का लागि प्रदेश ५ मा पनि नीति तथ कार्यक्रम र बजेटको तयारी भइरहेको छ । यसका बिषयमा सामान्तया छलफल भइरहेको छ । यो वर्ष विश्वकै एउटै मुद्धा भनेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नै हो । यसले दलित सिमान्तकृत वर्ग लगायत अन्य समुदायमा पारेको प्रभावलाई लक्षित गरि बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ । नारामा मात्रै नभएर रोजगारमा जोड्ने गरि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । लकडाउनका अवधिमा पनि जातका आधारमा विभेद भएको खबर पनि सुनिएको छ । तसर्थ कोभिडले निम्तयाएको असरसँगै सामाजिक कुरितिहरु अत्य गर्नका लागि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव मैलै दिएको छु ।
धेरै बजेट सिमान्कृत वर्गलाई छुने खालको हुनुपर्छ । मन्त्री र प्रमुख सचेतक मार्फत कुराकानी भइरहेको छ । यो पटक कोभिड १९ लाई हल गर्ने गरि बजेट आउछ, त्यसकारण दलित समुदायले अघिल्लो वर्ष प्राप्त गरेजति बजेट नआउन सक्ने सम्भावना छ । तदाथि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारमूलूक कार्यक्रममा पनि दलित समुदायहरुले लाभ लिनसक्ने गरि ल्याउनुपर्छ भनेर मेरो तर्फबाट पहल हुन्छ ।
रिना नेपाल, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश ५
कोभिड १९ ले गर्दा घरमै बस्नुपरेको छ । अझ कपिलबस्तु जिल्ला कोरोनाको उच्च जोखिममा छ । कपिलबस्तुमा बसेको हुँदा यसबाट बच्नुपर्ने स्थितीमा छु । सदन छैन । जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरुका क्वारेन्टाईनको अनुगमनमा खटिएको छु । क्वारेन्टाईन मापदण्ड अनुसार नभएको पाईएको छ । यिनै बिषयमा केन्द्रीत छु । जहाँसम्म प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रमले दलित र सिमान्तकृतको सवालमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषय धेरै छ । अहिले कोरोनाले सबैभन्दा बढि मारमा पारेको समुदाय दलित, महिला, मधेशी र सिमान्तकृत समुदाय नै हो । तसर्थ नीति तथा कार्यक्रमले यी समुदायलाई छुनुपर्छ ।
भौतीक पूर्वाधार, वन तथा उद्योग, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फोन आएको थियो । नयाँ योजनाहरु नल्याउने भन्ने कुरा आएको छ । अब भोकमरी हुने अवस्था सृजना हुने अवस्था छ । यसका लागि खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि गर्ने योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ । भोकमरी, आर्थिक संकट र स्वास्थ्य संकटसँग जुध्ने गरि नै नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । महामारीका युद्धमा छौं । गरिब किसानलाई लगानी गर्ने , लक्षित समुदायलाई रोजगारहरुलाई ल्याउने, विदेशबाट फर्कने व्यवस्थापन गर्ने गरि बजेट आउनुपर्छ । गत वर्षको बजेटमा सिमान्तकृत र दलितको क्षेत्रमा बजेट कम नै थियो । तर अहिले त झन कम हुने अवस्था देखिएको छ । केन्द्रले नीति तथा कार्यक्रममा दलितलाई सम्बोधन नगरेकाले त्यसको असर यहाँ पनि पर्ने सम्भावना छ । अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमूलूक र कृषिमै केन्द्रीत गरि बजेट ल्याउनुपर्छ तर यसो हुँदा पनि दलित र सिमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने गरि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जातीय रुपमा छुवाछुत भोग्नुपरेकाले त्यसका लागि पनि बजेट छुटाउनका लागि मेरो तर्फबाट पहल हुनेछ ।
माला गोतामे, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश ५
लकडाउन भएकाले म सेल्फ क्वारेन्टाईनमै छु । तर, जनप्रतिनिधि भएकाले मेरो जिल्ला कपिलबस्तुका विभिन्न स्थानीय तहहरुले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको कामका बषियमा जानकारी लिने काममा पनि खटिएको छु । जिल्लाका क्वारेन्टाईनहरुको अनुगमनको काममा पनि खटिएको छु ।
अब भने यो संकटका विच पनि सदन चल्ने भएको छ । अब सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी समेत गरेको छ । यो सवालमा दलितमैत्री नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम हुन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट के कसरी गर्ने, पोहोर जति बजेट आउँदैन भन्ने कुराको खबर आएको थियो । गत वर्षका नभएका कार्यक्रम निरन्तरता दिने तर नयाँ कार्यक्रम भने नल्याउने अवस्था देखिएको छ । सांसदको हिसाबले सरकारलाई सुझाव दिने हो तर कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो भन्न सकिदैन । नेपालमा हरेक विपदको समस्यामा पर्ने भनेको दलित समुदाय नै हो । कोरोनाले पनि यहि समुदालाई असर पारेको छ । तसर्थ दलित मैत्री बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
दान सिंह परियार,
तीनै तहको सरकार कोरोना भाइरस रोकथाममा केन्द्रित रहेकाले जनप्रतिनिधीको हिसाबले हामी पनि त्यो कार्यमा सक्दो सहयोग गरिरहेका छौं । जेठ ११ गतेबाट कर्णाली प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु हुने तालिका छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी दलितमैत्री बनाउने भन्ने विषयमा दलित सभासदबीच कुराकानी भइरहेको छ । गएको वर्ष ल्याईएका योजना कार्यान्वयनमा लकडाउनले पनि असर गरिरहेको छ । लक्षित वर्गका ल्याईएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
अघिल्लो हाम्रो प्रदेशले सबैभन्दा बढी बजेट दलित र सिमान्तकृतहरुका लागि छुट्याएको थियो । यद्यपि, सोच अनुरुप ती कार्यक्रम सफल बन्न सकेनन् । विगतको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समिक्षा गर्दै आगामी वर्षमा कस्ता कार्यक्रम ल्याउने र दलित, सिमान्तकृतको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्ने भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । यो विषयमा दलित सांसदहरुबीच छलफल भइरहेको छ । हाम्रो तर्फबाट कस्तो पहल र भूमिका खेल्ने भनेर योजना पनि बनिरहेको छ ।
दलित समुदायका मानिसलाई उद्यमशिलता र रोजगारीसँग कसरी जोड्ने ? भन्ने विषयमा नै हामी केन्द्रित छौं । गएको वर्ष कानुन बनाउने कुरामा नै केही चुनौतिहरु आए । त्यसकारण पनि सोचे अनुरुप सफलता पाउन सकिएन । यो कुरामा सचेत हुँदै आउँदो बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन सक्दो पहल गर्ने योजनामा छौं । उत्पादन, श्रम र रोजगारी क्षेत्रमा दलित समुदायको उपस्थिति व्यापक रुपमा वृद्धि गर्ने कुरा आगामी बजेटले समेट्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं ।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेशमा ५ जना सभासद छौं । हाम्रो समुदायको उत्थानमा केन्द्रित कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेर केही चरणको छलफल पनि गरिसकेका छौं । प्रदेश योजना आयोग अनि विषयगत मन्त्रालयसँग पनि हामीले हाम्रो मागहरु सशक्त रुपमा उठाएका छौं । कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पछाडि पारिएका समुदाय, दलित र महिलाको अवस्थालाई सूचक बनाउन पनि आग्रह गरेका छौं । बजेट अधिवेशनमा पनि हामी यो कुरालाई राख्ने छौं । समतामुलक समाज निर्माणका लागि पिँधमा रहेको समुदायलाई माथि नउठाई सम्भव छैन । यसको लागि व्यक्तिगत तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेको छु र गरिरहनेछु ।
म जिल्ला तिर थिएँ । बन्दाबन्दीको कारण लामो समय उतै अड्कीएँ । बल्ल सुर्खेत आइपुगेको छु । कोरोना भाइरस रोकथामको विषयमा अलि बढी केन्द्रित भइयो । समस्यामा परेका आम नागरिकहरुलाई आफुले सकेको सहयोग गर्दैमा दिनहरु बितिरहेका थिए । अब नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशले कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदैछ । त्यति धेरै बुझ्न पाएको छैन । संसदमा छलफल हुँदैछ । त्यहाँ आफ्ना कुराहरु राख्ने नै छौं ।
दलित र सिमान्तकृतहरुको पक्षमा अघिल्लो वर्ष ल्याइएका थुप्रै योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । लक्षित वर्गको उत्थानमा हामीले खासै उपलब्धीहरु हाँसील गर्न सकेका छैनौं । ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउन अत्यावश्यक छ । ल्याइएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखिरहेकाले त्यसको हल गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । वर्षैपिच्छे बजेट त आउँछ तर लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा त्यसले खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिरहेको छैन । आफ्नो तर्फबाट दलितमैत्री बजेट ल्याउन सक्दो पहल गर्न प्रतिबद्ध छु ।
उमा कुमारी वादी, प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश
म अहिले टिकापुर कैलाली छु । बन्दाबन्दीको बेला छ, छिमेकीलाई कतै अप्ठ्¥यारो परे सरसल्लाह दिने,सहयोग गर्ने गरेकी छु । अब प्रदेशमा पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारी हँुदैछ । मलाई चिन्ता लागेको छ कतै संघीय सरकारको जस्तै नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशमा आउने हो की ? भनेर किनकी संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा दलित र सिमान्तकृत समुदायको कुरा पर्न सकेको छैन । अहिले म दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको कस्ता कार्यक्रम आगामी बजेटमा राख्ने भनेर दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका अघुवाहरु, बुद्धिजीबिहरु, नागरिक समाज र विभिन्न समुहहरुसंग सरसल्लाह लिइरहेकी छु । आगामी बजेटमा दलित तथा सिमान्कृत समुदायका समस्या बुझेर संबिधानको धारा उपधारालाई टेकेर नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । प्रदेशमा म लगायत अन्य माननियहरु द्यलितमैत्री बजेट ल्याउन दबाब दिने र झक्झकाउने काममा संगठित भएर जुट्ने छौं ।
प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश
लकडाउन भएकाले सरकारको नियम पालना गर्दै म अहिले धनगढीमा छु । कतिपय समितिका बैठकहरु भइरहेका छन । म यहाँ भए पनि जिल्ला तिर सम्पर्क, समन्वय र सहजिकरणको काम गरिरहेको छु । त्यस्तै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेकाले अहिले जम्मा भएर सुझाव लिने अवस्था त छैन यद्यपि, टेलिफोन र सामाजिक संजालको प्रयोग गरेर सुझाव संकलन गरिरहेको छु ।
त्यस्तै हाम्रो प्रदेशमा दलित सांसद छ जना छौं । हामी सल्लाह गरेर सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छौ । अहिले विकास निर्माण भन्दा पनि मान्छेको जीवन बचाउने र जीविकोपार्जन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । लकडाउनको मारमा सबै भन्दा बढि दलित तथा सिमान्कृत समुदाय परेको हँुदा उनीहरुको पहुँचमा पुग्ने खालका कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छौं । त्यस्तै दलित माथि विभेदका घटना भइरहेका छन, त्यसका लागि बलियो नी िबनाउन र सोही अनुरुप कार्यक्रम ल्याउन पनि पहल गरिरहेका छौैं । कतिपय विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण कार्यन्वय गर्ने निकायलाई ईमान्दारीका साथ पालना गराउन, खबरदारी गराउन ,दवाव दिन मेरो मैले सक्दो भूमिका खेल्नेछु । अहिले हरेक किसीमका विभेद कायमै छन् । धनी गरिब, पुरुष महिला, ठुलो सानोबिच मात्रै हैन संघीयतामा पनि विभेद भइराखेको छ । धेरै अधिकार संघमै राखिएको छ । त्यसकारण प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम यस्ता विभेद अन्त्य गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
मान बहादुर सुनार,
म अहिले धनगढि कैलालीमा छु । हाम्रो प्रदेश भारतीय सीमा नाकासंग जोडिएकाले भारतबाट आएका मजदुरहरुलाई उद्धार समन्वय र सहयोग गर्ने काममा पनि लागेको छु । प्रदेश सरकराले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्दैछ । त्यसैले टेलिफोनबाट सरसल्लाह ,सुझाव लिएको छु । अरु प्रदेशका दलित साथीहरुसंग पनि कुराकानी भैरहेको छ ।
आगामी दिनमा प्रदेशका दलित माननियहरुसंग छलफल गरेर सुझाव सरकारलाई दिने छौं । संघिय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो तर दलित सिमान्तकृत समुदायलाई छुने कुनै पनि कार्यक्रम छैन । त्यसकै प्रतिलिपीको रुपमा प्रदेशले कार्यक्रम ल्याउने कुचेष्टा नगरोस् भनेर हामी आवाज उठाउनेछौं ।
आगामी बजेटमा हरेक निकायमा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व, दलितका परम्परागत सिप, कलाको आधुनिकिकरण, जोडदिने खालका नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्छ । यीनै कुराबारे सक्दो पहल र पैरवी पनि गर्ने छौं । दलित तथा सिमान्तकृतहरुको हित बिपरित नीति तथा कार्यक्रम आए विरोध र पक्षमा आए समर्थन गर्नेछु ।
टेक बहादुर राईका आउजी, प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश
म अहिले लकडाउनको पालना गर्दै महाकाली नगरपालिका कञ्चनपुरमा छु । हाम्रो प्रदेश भारतीय सीमा नाकासंग जोडिएकाले भारतमा काम गर्न गएका नेपाली श्रमिकहरुलाई उद्धार गर्ने,क्वारेन्टाईनमा राख्न समन्वय गर्ने काम भएको छ । केहि दिन अघि प्रदेश सरकारको बैठक बसेको थियो । त्यहाँ पनि कोरोना भाईरसलाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई सवाललाई समेट्ने सामान्य छलफल भएको थियो ।
यसको मारमा सबै भन्दा पछाडि पारिएको दलित तथा सिमान्तकृत समुदाय भएकाले त्यो समुदायको पहुचमा पु¥याउन कस्ता निती तथा कार्यक्रममा पार्ने भनेर माननिय ज्युहरुसंग, दलित अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्ने छौं । दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन त्यसमा सरोकारवाला निकायमा भन्न, खबरदारी गर्न म पछि पर्ने छैन ।
रेम बहादुर विश्वकर्मा, विनोद परियार, बिरु नेपाली, सिता विके र हरिजंग थापाले विभिन्न प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग टेलिफोनमा गरेको कुराकानीमा आधारीत
कोरोना विशेष सम्बन्धित
कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण भएपनि नेपालसम्म आईपुग्न थुप्रै चुनौतीहरु छन् ।
२४ घण्टामा कोरोनाबाट २२जनाको मृत्यू, काठमाडौमा पुगे १ लाख संक्रमित
एन्टिभाइरस औषधि रेमडेसिभिर प्रयोग नगर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को सुझाव
६ कम्पनीका हानिकारक स्यानिटाइजर विक्री वितरणमा रोक
जातीय छुवाछुत तथा बालविवाह विरुद्ध लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले ३ महिने अभियान शुरु गरेको छ ।जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य गदै...
पौष २७, २०७७
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा भूमिसम्बन्धी आयोगको इकाई कार्यालय स्थापना
तिलोत्तमा नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गरिएको छ । आयोगसँग हालै भएको कार्यसम्झौता अनुसार...
पौष २४, २०७७
संगीतकार परियारको निधन
संगीतकार एवं वाद्यवादक गणेश परियारको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। छातीमा खराबी देखिएपछि उपचारका लागि ओम अस्पताल भर्ना भएका...
रोटरी ई–क्लव मेडिकोफ्युजन हाइब्रीड नेपालले ‘जथाभावी नथुकौं’ अभियान सुरु गरेको छ । थुकले मृत्यु फैलाउँछ भन्ने सन्देश फैलाउन अभियान सुरु...
दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा प्राप्तिको निवेदन ३५ दिनभित्र बुझाउन आग्रह
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आफू बसोबास गरिरहेको वा आवाद गरेको जग्गा प्राप्तिका लागि...
रुपन्देहीको तिलोत्तमाका दुग्ध उत्पादक किसानलाई झण्डै ४६ लाख अनुदान
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान रकम प्रदान गरेको छ । नगरपालिकाले सहकारीमार्फत् दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर...
Katwal Radio Magazine 2077-09-08